Oduu Gaddaa!Jaal Ahmednuur Mohammed Hassan Dhibee COVID 19 harka kennachiisteeti. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Gaddaa!Jaal Ahmednuur Mohammed Hassan Dhibee COVID 19 harka kennachiisteeti.
Oduu Gaddaa! Jaal Ahmednuur Mohammed Hassan Dhibee COVID 19 harka kennachiisteeti.
Jaal Ahmednuur Mohammed Hassan Goota rasaasni dinaa diree lolaa Bosonaa fi Gaarreen Oromiyaa hin dandeenye dhibee COVID 19 harka kennachiisteeti.
Jaal Ahmadnuur Mohamme Hasan ykn maqaan qabsoo Diinayaas Gammadaa umuriin isaa wagga 49 fi abbaa ijoollee afuurii turan.
Jaal Ahmednuur Mohammed Hassan, bakki dhaloota isaa Harargee bahaa Ona Jaarsoo ganda Mulaataa bakka je’amtutti dhalatee. Osoo umriin isaa dargaggummaa illee haalaan hin guutin roorron gabrummaa itt jabaachuu irra bara dargii keessa gara qabsoo hidhannoo geeggeessitti deemee bara 1986 akka lakkofsa Awurooppatti WBO baha Oromia waliin leenjii fudhatee diina kuffisaa ture.
Bara chartaraa booda murna WBO deebisee Of ijaaree zooniilee yeroo sanitti ABOn qabu keessaa zoonii qindhudhoo tan baha Oromiyatti hargamtu keessatti cibirraa kan Jaal Baazuqaan hoogganamtu keessatti diinaa isaa jilbiinfachiisuuf qabsoo hadhoytuu geggeesaa nama turee fi loloola hedduu irratti nama hirmaataa ture. Boodarra marfamaa diinaa hamaa keessa seenuu jaallan isaa hedduun wareegamuu fi madaahuun, innis akkuma jaallan isaa carraa madaahuu isa mudatee ture. Goonni yeroo san yeroo WBOn bahaa dhiibamee Somaaliyatti bahu san waan taheef innis, haala isa mudatee biyya ollaa Somaaliyaa Bisaasoo keessatti rakkachaa erga tureen booda dhuma 2016 carraa biyya sadaffaa argachuun Sweden Stockholm qubachuu dandahe ture .
Jaal Ahmadnuur nama rasaasa diinaatin qaama hirrate biyya ollaa keessatti gargaarsa tokko malee wallansa malee yeroo dheertuu waan tureef miidhhaa cimtuun isarra geesse takka abdii isa hin murachiisne. Bara 2017 akkuma biyya Sweden dhufeen konyaa ABOn biyya alaa keessaa qabu konyaa Ayyantuu Dagaatti miseensa tahuun dirqama isaa guutuuguututti nama bahaa turee fi ABO karaa diinagdeen cimsuuf hawwii guddaa nama qabuudha.
Goonni kun yeroo hunda jecha isaa keessa yeroo nyaata dhiheeyfattan WBO yaadadha jechuun WBOn akkuma keenya gargaaramuu akka qabuu fi isaaniin malee furmaanni hin jiru jechuun abdii WBO irraa qabu kan nutti dhaammataa turee dha.
Egaa Waaqayyoon boolla isaanii jannataan haa qananiisiisu.
Firoota, Jaallan isaa fi ijoollee isaaf jajjabina haa kennuun dhaamsa keenya. Qabsa’aan ni kufa Qabsoon Itti Fuffa!
Konyaa Ayyantuu Dagaa